၆ ဂဏန်းသမားများအကြောင်း – Trend.com.mm
Posted on May 5, 2020 by adminK
မည်သည့်လတွင်မဆို ၆၊ ၁၅၊ ၂၄ ရက်မွေးသူများကို ၆ ဂဏန်းသမားများဟု ခေါ်သည်။
သံယောဇဉ်ကြီး၍ ခိုင်မာသော မေတ္တာတရားနှင့် မိမိက ချစ်ရသူအပေါ် အမြဲစိတ်ချမ်းသာအောင် ဖြည့်ဆည်းပေးရမည်ဟူသော အယူအဆရှိသည်။ ချစ်ခဲ၍ အချစ်မြဲသည်။ မိသားစု အသိုင်းအ၀ိုင်း မတူညီသူကို ရွေးချယ်၍ အားလုံးနှင့် ဆန့်ကျင်ရန် ၀န်မလေး။ အပျော်သဘော စိတ်ကစားခြင်း မရှိဘဲ သစ္စာ တရားရှိမှ အချစ်မေတ္တာသည် ပြီးပြည့်စုံသည်ဟု ယူဆထား သူဖြစ်သည်။ သို့သော် သူတစ်ပါးအပေါ် မိမိပေးဆပ်သလောက် ထပ်တူ ပြန်ကောင်း သူရရန် ခဲယဉ်းပေသည်။ အချစ် မေတ္တာထက် တစ်စတစ်စ ရစ်နွယ်လာသော သံယောဇဉ်ကို နှစ်သက်သူဖြစ်သည်။
၁။ အိုး… မင်း ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်ပဲ မွေးဖွားလာတာပါလား။
၂။ မင်းဟာ တခြားလူရဲ့ခံစားချက်ကို ဂရုမစိုက်တက်သူတစ်ဦးပေါ့..ဆိုလိုတာက မင်းဘ၀မှာ
မင်းဟာ အမြဲတမ်း ပျော်ရွှင်နေချင်တဲ့သူပါ။
၃။ မင်းဟာ ပညာရေး..အလုပ်..စီမံခန့်ခွဲမှုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်.. အောင်မြင်မှုသူတစ်ဦးပါ။
၄။ မင်းဟာ ကြင်နာတက်ပါတယ်..(ဒါပေမယ့် မင့်စိတ်ထဲမှာ ကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့
၅။ ရုပ်ရည်အရမ်းချော်မောနေတတ်ပြီး ဘ၀ဟာလည်း. ကံကောင်းခြင်းတွေ စုနေတတ်ပါတယ်။
ကံကြမ္မာကောင်းတွေဟာ မင်းနဲ့အတူလာတယ်လို့ ပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်။
၆။ မင်းရဲ့စိတ်ထားနဲ့ခန္ဓာဟာ အချစ်ကိစ္စတွေမှာ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲရှိလှပါတယ်။
၇။ တခြားနံပါတ်တွေရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ခံရတတ်ပါတယ်…ဒါပေမယ့်..
မင်းဟာ အမျိုးသားဆိုရင်တော့.. လက်ထက်တဲ့အချိန်အထိ မိန်းကလေးငယ်များနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီးနေရတာကို နှစ်သက်တဲ့သူတဦးပါ…
အမျိုးသမီးသာဆိုရင်တော့.. စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းမှု..ဒါမှမဟုတ် လက်ထပ်တာကို
စောစောစီးစီး ရင်ဆိုင်ရတက်ပါတယ်…ကြင်နာတက်သူတွေပဲ မင့်ဘ၀ထဲကို ၀င်လာပါလိမ့်မယ်.။
၈။ ယေဘုယျအားဖြင့်တော့.. မင်းဟာ အိမ်ရဲ့ဆည်းလှည်းလေးပါပဲ…
၁၀။ မင်းရဲ့အကောင်းဆုံးအဖော်မွန်တွေကတော့.. 1, 6, and 9.
ဗီးနပ်စ်ဆိုတဲ့သောကြာနတ်သမီးစိုးမိုးသူတွေပါပဲ။ စိတ်နှလုံးနူးညံ့တယ်။ အနုပညာခံစားသလိုတီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းလဲရှိကြတယ်။ ဆွဲဆောင်အားကောင်းသလိုစန်းပွင့်တတ်ကြတယ်။
သူတပါးကိုအလွန်ကူညီတတ်သူတွေလဲဖြစ်ပါတယ်။ လူချစ်လူခင်ပေါများပြီး အချစ်စိတ်ပြင်းပြပေမယ့် သူတို့ ချစ်ခင်သူတွေကို အသက်ပေးကာကွယ်တတ်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုးလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဇိမ်ခံ ရတာ၊အစားကောင်းကြိုက်တာကလည်း သူ့စရိုက်လေးမို့ ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ကြပါ။
မညျသညျ့လတှငျမဆို ၆၊ ၁၅၊ ၂၄ ရကျမှေးသူမြားကို ၆ ဂဏနျးသမားမြားဟု ချေါသညျ။
သံယောဇဉျကွီး၍ ခိုငျမာသော မတ်ေတာတရားနှငျ့ မိမိက ခဈြရသူအပျေါ အမွဲစိတျခမျြးသာအောငျ ဖွညျ့ဆညျးပေးရမညျဟူသော အယူအဆရှိသညျ။ ခဈြခဲ၍ အခဈြမွဲသညျ။ မိသားစု အသိုငျးအဝိုငျး မတူညီသူကို ရှေးခယျြ၍ အားလုံးနှငျ့ ဆနျ့ကငျြရနျ ဝနျမလေး။ အပြျောသဘော စိတျကစားခွငျး မရှိဘဲ သစ်စာ တရားရှိမှ အခဈြမတ်ေတာသညျ ပွီးပွညျ့စုံသညျဟု ယူဆထား သူဖွဈသညျ။ သို့သျော သူတဈပါးအပျေါ မိမိပေးဆပျသလောကျ ထပျတူ ပွနျကောငျး သူရရနျ ခဲယဉျးပသေညျ။ အခဈြ မတ်ေတာထကျ တဈစတဈစ ရဈနှယျလာသော သံယောဇဉျကို နှဈသကျသူဖွဈသညျ။
၁။ အိုး… မငျး ပြျောရှငျဖို့အတှကျပဲ မှေးဖှားလာတာပါလား..*
၂။ မငျးဟာ တခွားလူရဲ့ခံစားခကျြကို ဂရုမစိုကျတကျသူတဈဦးပေါ့..ဆိုလိုတာက မငျးဘဝမှာ
မငျးဟာ အမွဲတမျး ပြျောရှငျနခေငျြတဲ့သူပါ။
၃။ မငျးဟာ ပညာရေး..အလုပျ..စီမံခနျ့ခှဲမှုမှာပဲဖွဈဖွဈ.. အောငျမွငျမှုသူတဈဦးပါ။
၄။ မငျးဟာ ကွငျနာတကျပါတယျ..(ဒါပမေယျ့ မငျ့စိတျထဲမှာ ကောငျးတယျလို့ထငျတဲ့
၅။ ရုပျရညျအရမျးခြျောမောနတေတျပွီး ဘဝဟာလညျး. ကံကောငျးခွငျးတှေ စုနတေတျပါတယျ။
ကံကွမ်မာကောငျးတှဟော မငျးနဲ့အတူလာတယျလို့ ပွောလို့ရနိုငျပါတယျ။
၆။ မငျးရဲ့စိတျထားနဲ့ခန်ဓာဟာ အခဈြကိစ်စတှမှော လှိုကျလှိုကျလှဲလှဲရှိလှပါတယျ။
၇။ တခွားနံပါတျတှရေဲ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာကို ခံရတတျပါတယျ…ဒါပမေယျ့..
မငျးဟာ အမြိုးသားဆိုရငျတော့.. လကျထကျတဲ့အခြိနျအထိ မိနျးကလေးငယျမြားနဲ့ ရငျးရငျးနှီးနှီးနရေတာကို နှဈသကျတဲ့သူတဦးပါ…
အမြိုးသမီးသာဆိုရငျတော့.. စစေ့ပျကွောငျးလမျးမှု..ဒါမှမဟုတျ လကျထပျတာကို
စောစောစီးစီး ရငျဆိုငျရတကျပါတယျ…ကွငျနာတကျသူတှပေဲ မငျ့ဘဝထဲကို ဝငျလာပါလိမျ့မယျ.။
၈။ ယဘေုယအြားဖွငျ့တော့.. မငျးဟာ အိမျရဲ့ဆညျးလှညျးလေးပါပဲ…
၁၀။ မငျးရဲ့အကောငျးဆုံးအဖျောမှနျတှကေတော့.. 1, 6, and 9.
ဗီးနပျဈဆိုတဲ့သောကွာနတျသမီးစိုးမိုးသူတှပေါပဲ။ စိတျနှလုံးနူးညံ့တယျ။ အနုပညာခံစားသလိုတီထှငျဖနျတီးနိုငျစှမျးလဲရှိကွတယျ။ ဆှဲဆောငျအားကောငျးသလိုစနျးပှငျ့တတျကွတယျ။
သူတပါးကိုအလှနျကူညီတတျသူတှလေဲဖွဈပါတယျ။ လူခဈြလူခငျပေါမြားပွီး အခဈြစိတျပွငျးပွပမေယျ့ သူတို့ ခဈြခငျသူတှကေို အသကျပေးကာကှယျတတျတဲ့ပွငျးထနျတဲ့ စိတျဓာတျမြိုးလညျး ရှိနပေါတယျ။ ဇိမျခံ ရတာ၊အစားကောငျးကွိုကျတာကလညျး သူ့စရိုကျလေးမို့ ခှငျ့လှတျပေးလိုကျကွပါ။